रासस ‘राष्ट्रको टिकट’ हो - Nepal Samaj
४ फागुन, २०७७नेपाल समाजविचार
काठमाडौँ । नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज भ्यालु’ हो । राष्ट्रको समाचार समिति हुन्छ भनेर दक्षिण एशियाका मुलुक हेरे हुन्छ, अन्य राष्ट्रलाई पनि पनि हेरे हुन्छ । दोस्रो, खासमा यहाँ एउटा मात्र समाचार समिति छ । यो हुँदाहुँदै पनि यसको पहुँच कम देखियो, उपस्थिति कम भयो । राससले तयार गरेका समाचारको भोलुम(परिमाण) र भ्यालु(महत्व) का रुपमा हेर्नुपर्छ ।
राससले आम नेपालीका लागि उत्पादन गरेको परिमाण र महत्व कति छ भन्ने नै हो । तेस्रो, राससले गरेको सेवाको न्यूनतम पहिचान पाएको देखिएन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उपस्थिति कम भयो । जबर्जस्ती प्रयोग गराउने त होइन । रासस भनेको ‘राष्ट्रको हुलाक टिकट’ जस्तै हो । यो अन्य देशमा पनि हुन्छ । यहाँ पनि एउटा मात्र समाचार एजेन्सी हुँदा यसलाई राम्ररी हुर्कन सक्ने वातावरण नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले गर्न सक्नुपर्ने हो ।
राससले समाचारको उपस्थिति बढाउन यसको परिमाण बढाउनुपर्छ । परिमाण बढाउन साधनस्रोतसहित पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्छ । भर्ना गर्दा सक्षम मानिसलाई ल्याउनुपर्छ । सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्त भए पनि समाचारको परिमाण बढ्छ । त्यसैगरी नेतृत्वमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्यो भनेको प्रशासनिक र आर्थिक कारोवार त छँदैछ, विषयवस्तुमा पनि यो भयो र यो भएन, यसबाट यो हामीले गर्न सक्थ्यौँ, हामीले किन गरेनौँ भन्ने किसिमको अनुगमन र समीक्षा हो । समाचारबाट पाठक, स्रोता, दर्शक अन्यत्र पनि गइसकेका छन् । सङ्ख्या, विषयवस्तुको भोलुम र गुणस्तर ठीकठीकै थियो ।
त्यसो भए पनि अरु विकल्प नभएकाले अखबार नै पढ्थे । प्रसारणतर्फ रेडियो नेपाल मात्र थियो र पछि नेपाल टेलिभिजन आयो । उनीहरूकै सामग्री सुन्ने र हेर्ने हुन्थ्यो । अहिले सङ्ख्या पनि बढ्यो । काठमाडौँमा नै निजी क्षेत्रका १४/१५ वटा ‘ब्रोडसिट’ दैनिक नियमित आइरहेका छन् । काठमाडौँ बाहिर कम्तीमा २५/३० वटा त्यस्ता दैनिक पत्रिका नियमित छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नियमित प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकाको सङ्ख्या सवा सय जति छ । रेडियोमा नियमित न्यूज बुलेटिन दिने ६०० नाघिसकेका छन् । प्रतिस्पर्धा यो अवस्थामा चुलिएको छ । रासस भनेको विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा निजी तथा अन्य सरकारी निकायलाई पनि समाचार दिने संस्था हो तथापि पाठक, दर्शक, स्रोताका लागि विकल्प धेरै छ । कसैलाई सुन्न मन लाग्ला, कसैलाई हेर्न ।
अहिले मोबाइलबाटै सबै काम हुन्छ । पाठक इन्टरनेटमै हेर्छन् । यहाँ भन्ने बेलामा इन्टरनेट यति प्रतिशतमा पहुँच पुग्यो भनिन्छ र प्रतिशतको कुरा विश्वसनीय छैन भन्ने अनुमान थियो । बेलायतमै ६०/६२ प्रतिशत मात्रको पहुँच रहेछ भन्ने छ । त्यहाँ त शतप्रतिशत शिक्षित भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । लिभिङ स्यान्डर्ड सबै राम्रो भनेको देशमा त त्यस्तो छ । त्यसैले टोकन उपस्थिति मात्र भएर यहाँ इन्टरनेटको पहुँच यति छ भनेर भन्न मिल्दैन ।
सरकारले राससमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । सक्षम, व्यावसायिक र निर्भीक नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । राससले धेरै आम्दानी गर्न नसके पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त आर्थिक सहयोग दिनैपर्छ, अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन । भारतमा समाचार समिति दुई÷तीन वटा चलेका छन् । भारतमा विभिन्न नाममा विभिन्न उद्देश्यले समाचार संस्था खोलिएका छन् । उनीहरूले खुफिया कार्यका लागि पनि अन्य समाचार एजेन्सी खोलेका छन् । भारतमा युएनआइ र पिटिआई उहिलेदेखि छन् ।
उनीहरूलाई सब्सिडी दिइएको छ । काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म छरिएका हजारौँ सरकारी कार्यालय छन् । ती कार्यालय ती समाचार संस्थाका ग्राहक बन्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहक बन्ने भन्नेबित्तिकै पैसा उहीँबाट लिने हो । पैसा पुगेन भने त्यहीअनुसार रकम बढाइन्छ । यसरी अप्रत्यक्षरुपमा सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ । नर्डिक राष्ट्रहरूको व्यवस्था राम्रो भनिन्छ । त्यहाँ पनि समाचार समितिले आर्थिक सहयोग लिइरहेका छन्, ठाडै सहयोग(सब्सिडिज) दिइएको हुन्छ । हामी समग्रमा सहयोग गरिहेका छौँ, सहयोग दिन मिल्छ भनिरहेका हुन्छन् ।
त्यो सम्पन्न समाजमा पनि समाचार संस्थालाई आर्थिक सहयोग हुँदै आएको छ । यहाँ केको अप्ठ्यारो ? केही पनि अप्ठ्यारो छैन, खुलेर सहयोग गरे हुन्छ, गर्नुपर्छ । सेवाका लागि आम्दानी गर्ने हो । जुनजुन स्थानमा जग्गा छन्, त्यहाँ घर निर्माण गरेर बहालमा दिनुपर्छ तर सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुँदैन । जति पुग्दैन, त्यो रकम सरकारले दिनुपर्छ । सरकारले चाहेका अवस्थामा जति पनि रकम उपलब्ध गराउन सक्छ । अरु क्षेत्रलाई बेवास्ता नगरिकनै स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन लोभ गर्नुहुन्न । समाचारदातालाई दोब्बर तलब भन्नु पो भएन । समाचार उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ । संस्थालाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार त तयार गर्नुपर्छ नै । त्यसो गर्न नसकिएकाले रासस क्रमिकरुपमा सुक्दैछ । यो दुःखको कुरा हो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने रासस ‘डेकोरेटिभ पिस’ मात्र हुन्छ ।
संविधानले बढीभन्दा बढी समावेशिता भनेको छ । यहाँ समावेशिताको अर्थ सबै जिल्ला, नगरपलिका, गाउँपालिकाभित्रका अधिकतम विषयमा समाचार दिन सकियोस् । त्यसपछि बढी जनचासोको के हुन्छ र आफ्नो सामथ्र्य के हुन्छ, त्यसमा सीमित गर्ने हो । त्यसका लागि पहिला न्यूज भोलुम(परिमाण) बढाउनुपर्छ । जिल्लामा सयभन्दा बढी दैनिक छन्, उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सहुलियत मूल्यमा समाचार दिनुपर्छ । भोलुम र गुणस्तर बढ्ने भएपछि उनीहरूलाई घचघच्याउन पर्दैन । हाम्रो सेवा नै मुख्य हो । आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्रकै छन् ।
निजी क्षेत्रले कैयौंँ नसक्ला, विषयमाथि ध्यान दिन भनेर ‘पब्लिक सर्भिस जर्नालिज्म’को अवधारणा आएको हो । सरकारी मिडिया खण्डन पत्रकारिता भन्ने नहोस् । पब्लिक सर्भिस बोर्डकास्टिङ मात्र होइन, ‘पब्लिक सर्भिस न्यूज कन्टेन्ट’ हुनुपर्छ । राससलाई त्यही रुपमा लैजानुपर्छ । उसले रेडियो, टिभी र अनलाइन, प्रिन्ट सबैलाई समाचार दिन्छ । निजी क्षेत्रका संस्थालाई पनि दिन्छ, सरकारी संस्थालाई पनि समाचार दिन्छ ।
समावेशितामा राजनीतिक कुरा पनि आउनुपर्छ । प्रतिपक्षको कुरा रासस, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनले दिनुपर्छ । दिएको छ कि छैन, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जथाभावी बोलेको कुरा दिनुपर्छ भन्ने होइन । यसबारे रासस आफैँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसैले उग्र कुरा ग¥यो भने स्वतः राखिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । विषय वा घटना हुनुपर्छ । रणनीतिक रुपमा राससले नदिँदैमा वा सरकारी सञ्चारमाध्यमले नदिँदैमा समाजले त थाहा पाइहालेको हुन्छ ।
त्यसैले समाचार रोक्नु हुन्न । स्थान, शब्द र प्राथमिकता सम्पादकको कुरा हो । त्यो घटना रेकर्ड त हो, ५० शब्दमा भए पनि त्यो चाहिन्छ । म आफैँले सरकारी मिडिया राइजिङ नेपालमा काम गर्दा यसतर्फ प्रेरित गरेको गरेको थिएँ । अर्को प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दामा सम्पादकीय नै लेखिएको थियो । कुन टोनमा लेख्ने भन्ने कुरा फरक हो ।
आफ्नो सीमा हुन्छ । सम्पादकहरू त्यतिबेलासम्म स्वतन्त्र हुन्छन्, जतिबेलासम्म मालिकले चेक गर्दैनन् तर, मालिकले नरोकेसम्म भने दिनैपर्छ । मालिकको कुरा गर्दा उसले आफूलाई खुम्च्यायो भने आफूले छाड्न सक्नुपर्यो । यदि निरन्तररुपमा काम गर्ने हो भने उसको कुरा मान्नैप¥यो । राम्रो सामग्री दिइयो भने सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रयोग गर्छन् । राससले केही जनसम्पर्क बढाउनुपर्छ । हामीलाई एपी, एएफपीले सस्तोमा समाचार दिइरहेका हुन्छन् । हामीले पनि ग्राहकलाई आकर्षण गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँमा पानी आएन, आएन, मेलम्ची–मेलम्ची भनेर मात्र हुन्छ ? पानी तुलसीपुर, हेटौँडा र वीरगञ्जमा पनि पर्याप्त छ कि छैन, यो पनि सञ्चारमाध्यमले बताइदिनुप¥यो । त्यहाँको समाचार कहिल्यै नआउने त ? के काठमाडौंलाई मात्र नेपाल मान्ने हो ? उत्कृष्ट नगरपालिका कुन हो, राजस्व आम्दानीको हिसाबले कुन हो, दिए हुन्छ । सबै सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रिय समाचार समितिले नै यस्ता समाचारमा ध्यान पु¥याउन सक्छ ।
त्यस्तै सरकारी सञ्चारमाध्यम समयअनुसार फरक पर्छ । सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि राससले राम्रो सेवा दिनुपर्यो । त्यही मात्र पढ्ने र सुन्ने हुँदैन जस्तो युपिआइ, युएनआई संस्थाको राख्नुपर्यो । यसो गर्दा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैले समाचार पढ्ने हुन्छन् । सरकारी, निजी संस्था, सुरक्षा निकायहरुले पनि पढ्ने हुन्छन् । अहिले पहिलाजस्तो छैन, अहिले कम्प्युटरमार्फत विषयवस्तु जाने हो । उदाहरणका लागि सरकार विरोधी जुलूस आयो भने यस्तो जुलूस आयो भनेर दिनुपर्छ । तत्काल दिइयो भने सूचना थाहा पाइन्छ ।
(लेखक राससका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख रासस हीरक वर्षका पूर्वसन्ध्यामा कुराकानीमा आधारित भई प्रकाशन गरिएको हो )